यसरी त ध्वस्त भयो नेपाली! – Rapti Khabar
ह्यात्तेरीका! ‘रिप्लेस’ लाई नेपालीमा के भन्छन्?
हैन, स्कुल पढ्दासम्म त नेपालीको ‘डन’ थिएँ त म। अझै याद छ, चार क्लास पढ्दा नयाँ स्कुल गएको दिन। गएको भोलिपल्टै पुनमले, ‘तिम्रो नेपाली त कति राम्रो, सरकारी स्कुलबाट आको हो तिमी?’ भनेर सोधेको।
जाबो चारमै पढ्दा, ‘राम्रो नेपाली त सरकारी स्कुलमा मात्रै सिकिन्छ’ भनेर कसले पो सिकायो होला उसलाई!
हुन त ‘मे आइ गो टु पिस म्याम?’ को ठाउँमा ‘म्याम, पिसाब फेर्न जाम?’ भनेपछि, जरिबाना तिर्नुपर्छ भन्ने सुन्दै हुर्केको मान्छेलाई, त्यस्तो लाग्नु अब्भियस पनि होला। मतलब, सामान्य होला।
खैर, त्यो कुरा छाडौं। अँ, त्यसरी गज्जब नेपाली बोलेर सरकारी स्कुलेको ट्याग नै लागेको मान्छे, मेरो नेपाली कहिले चाहिँ यस्तो ध्वस्त हुन भ्याएछ! फेरि ‘ट्याग’। पगरी लगाएको भन्दा ठीक होला है?
तर बीचबीचमा ‘आई मीन’, ‘अफ् कोर्स,’ ‘ओ सिट!’ लाई ‘ओ सेट!’ भन्दै इङ्ग्लिस घुसाउन त सकिथ्यो। सजिलोको सजिलो, स्ट्यान्डर्डको स्ट्यान्डर्ड।
यही सजिलो र स्ट्यान्डर्डको चक्करले फनफनी घुमायो क्यार। अब त सजिलो र स्तरीय भन्नै बिर्सिएछु। स्तरीय खासै अप्ठ्यारो शब्द त हैन। कहिलेसम्म त भन्ने पनि गर्थेँ। लेख्थेँ पनि- ‘स्तरीय’।
खासमा अलि उमेर पुग्न थालेपछि ‘भाषा मिडियम मात्रै हो’ भनेर पनि कुरो बिग्रेको के!
कसैले अंग्रेजीमा दोष देखाए, ‘मेरो मातृभाषा हैन’ भन्यो, उम्कियो। कसैले नेपालीमा दोष देखाए, ‘बोर्डिङ पढियो, नेपाली बिग्रियो’ भन्यो, पन्छियो।
अब त ‘भाषा माध्यम मात्रै हो, मेरो कुराको गुदीमा ध्यान देऊ न’ भन्न पनि कनिकुथी गर्नुपर्छ। ‘भाषा मिडियम मात्रै हो, कुराको कन्टेन्टमा ध्यान देऊ न,’ ल, कति सजिलो भयो।
फेरि बगेछु। चुरो कुरो चाहिँ नेपाली सिक्नुपर्‍यो अब। किताब पढ्छु एउटा नेपाली। नेपाली भोक्याब गतिलो बनाउनु पर्‍यो। फेरि ‘भोक्याब’। ‘भोक्याब’लाई नेपालीमा के भन्नु अब? खैर, किताब पढेर सिकिएला नि।
हेर, किताब किन्ने सोच्दासोच्दै ‘ढाडस’ सम्झिहालेँ। केही होला जस्तो छ केटीको! नभए योभन्दा पहिले कहिल्यै यो शब्द युज गरेको याद छैन। उफ! फेरि ‘युज’। एक कदम अगाडि बढ्यो, अंग्रेजीको लगामले चार कदम पछाडि तानिहाल्छ। अब उप्रान्त यो लेखमा ‘प्रयोग’ मात्रै प्रयोग गरिनेछ। फेरि ‘युज’ लेखेँ भने, यो लेख पढ्नै बन्द गरिदिनुहोस् है। नत्र अलिअलि डर बिना त सिकिएला जस्तो नै छैन।
भूमिकामै लेखिएको थियो- ‘एब्स्ट्र्याक्ट’ शब्दको उल्था अनेक किसिमबाट गर्न सकिन्छ। तर पनि मूल शब्दको जुन मात्रिक झंकार छ, त्यसको आत्माका लागि मैले शब्दको हत्या गरिनँ।
विनोध चौधरीले ‘धन-पैसा ठूलो कुरा हैन’ भन्नु र कुनै टाँट पल्टेको भूपु व्यापारीले त्यसो भन्नु फरक रहेछ। वर्षभरी मिहिनेत गरेर पढ्ने टपर विद्यार्थीले ‘मार्क्स डजन्ट म्याटर’ भन्नु र सोही कुरा कहिल्यै नपढेर फेल हुन आँटेको डुकुलन्ठकले भन्नु फरक रहेछ। टपर शंकरले दिएको तर्क पकड्दै आफ्नो कमजोरी छोपेर म झन्डै डुकुलन्ठक बनिनँ।
‘फेसको ग्लो’ भन्दाभन्दै ‘अनुहारको कान्ति’ भन्नै बिर्सिएछ। कान्ति त बाल अस्पतालको नाम मात्रै हो जस्तो पो लाग्छ अब। सित्तिमित्ति कसैको ‘औरा’ ले प्रभाव नपार्ने मान्छे, ‘आभा’ शब्दको आभा देखेरै कायल भएँ एकछिन। जहिल्यै ‘#बिइङ अलाइभ’, ‘#लाइभ्ली’ भन्दै लेख्नेलाई ‘जीवनदायिनी’ शब्दले खुत्रुक्कै बनायो। जाबो ‘प्रयत्न’ जस्तो साधारण शब्द पनि अप्ठ्यारो लागेर, ‘एफर्ट’ नै लगाई-लगाई ‘प्रयत्न’ भन्ने बानी बसाल्नु पर्‍यो। कहिल्यै कसैलाई ‘इन्फेरिवरिटी कम्प्लेक्स’ हुनु हुँदैन भन्थेँ, यति चेत आइसक्दा आफैंलाई लघुताभाष हुन थाल्यो।
रियालिटी चेक भएछ थुप्रैबेर। अब यही ‘रियालिटी चेक’ लाई पनि नेपालीमा के भन्छन्, थाहा छैन। यो के भइरहेछ माइ लर्ड!
‘आयुष्मान भव’, ‘आयुष्मती भव!’ भनेका आशीर्वाद लागेछ भने बूढाबूढी भइएला कुनै दिन। त्यो बेला, ‘ढिकी-जाँतो त सजिला मिल-मसिनहरू आए अनि हराए’ भन्ने तर्क दिइएला। तर नातिनीले ‘मिलभन्दा सजिला अनि ढिकी-जाँताभन्दा सुन्दर नेपाली शब्द चाहिँ कसरी हराए’ भनेर सोधिन् भने? के पो भन्नु होला?
यसरी त ध्वस्त भयो नेपाली! एउटै वाक्यमा कति धेरै अंग्रेजी शब्द प्रयोग गर्ने भइएछ। कस्तो सामान्य शब्द पनि बिगारिने छ्या! अब त शुद्ध नेपाली बोल्छु। व्याकरण बिग्रिए पनि कम्तीमा शब्द शुद्ध प्रयोग गर्छु। मनमनै पनि शुद्ध सोच्छु। अहिल्यैबाट सुरू गर्नुपर्‍यो। जस्तै सामान्य अंग्रेजी शब्दलाई पनि नेपाली शब्दले प्रतिस्थापन गर्छु। यो पाराले त भएन! -सेतोपाटीबाट
लामो दुरीको यातायात असोज १ देखिनै खुल्ने, भाडा ह्वात्तै बढ्यो
भदौ ३०, काठमाडौं । सरकारले असोज गतेदेखि लामो दूरीका सवारी चलाउन दिने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिए। मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार सवारी चलाउँदा भाडा ५० प्रतिशतसम्म बढी लिन पाइनेछ। यात्रु राख्दा क्षमताको ५० प्रतिशतमात्र राख्नुपर्नेछ भने एउटा लहरमा एक जनामात्र […]
अब यी देशबाट नियमित उडान मार्फत आउन पाउनेछन् नेपाली
भदौ ४, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न देशबाट नेपाली नागरिक तथा नेपालस्थित नियोगका कूटनीतिज्ञ तथा कर्मचारीलाई नेपाल आउन नियमित उडान शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। यो खबर मणि दाहालले नेपालखबरमा लेखेका छन्। मन्त्रिपरिषको बिहीबार बसेको बैठकले विभिन्न देश तथा शहरबाट आउनेका लागि उडान नियमित गर्न निर्णय गरेको हाे। मन्त्रिपरिषदले मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), दक्षिण कोरिया, […]
कक्षा १२ को परीक्षा मिति तोकियो, कहिलेबाट हुन्छ परिक्षा ? [ हेर्नुस परिक्षा तालिका]